Olee Uru Ọnwụ Jizọs Baara Anyị? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
Olee uru ọnwụ Jizọs baara anyị?
Mgbe Chineke kere ụmụ mmadụ, ọ chọrọ ka ha biri n’ụwa ruo mgbe ebighị ebi. Ọ chọkwara ka ha ghara ịrịa ọrịa ma ọ bụ nwụọ anwụọ. Ma, nwoke mbụ bụ́ Adam adịghị ndụ ruo mgbe ebighị ebi n’ihi na o nupụụrụ Chineke isi. Anyị niile ketara ọnwụ n’aka Adam n’ihi na anyị bụ ụmụ ya. (Ndị Rom 5:8, 12; 6:23) Jehova Chineke zitere Ọkpara ya bụ́ Jizọs n’ụwa ka ọ nwụọ ma weghachiri anyị ihe ahụ Adam mere ka ọ kwaa anyị.—Gụọ Jọn 3:16.
Jizọs nwụrụ ka ụmụ mmadụ nwee ike ịdị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Olee otú i chere ụwa ga-adị mgbe ndị mmadụ na-agaghị anwụkwa anwụ?
Ọnwụ Jizọs nwụrụ n’ihi anyị mere ka Chineke na-agbaghara anyị mmehie anyị, ọ bụkwa ọnwụ ya ga-eme ka anyị nwee ike ịdị ndụ ebighị ebi. Baịbụl gwara anyị na oge na-abịa mgbe nká, ọrịa na ọnwụ na-agakwaghị adị n’ụwa.—Gụọ Aịzaya 25:8; 33:24; Mkpughe 21:4, 5.
Olee otú anyị ga-esi na-echeta ọnwụ Jizọs?
Tupu Jizọs anwụọ, o gosiri ndị na-eso ụzọ ya otú ha ga-esi na-echeta ọnwụ ya. Icheta ọnwụ Jizọs kwa afọ na-eme ka anyị na-echeta na Jizọs na Jehova hụrụ ụmụ mmadụ n’anya nke ukwuu.—Gụọ Luk 22:19, 20; 1 Jọn 4:9, 10.
N’afọ a, Ndịàmà Jehova ga-echeta ọnwụ Jizọs na Mọnde, abalị iri na anọ n’ọnwa Eprel, mgbe anyanwụ dachara. Anyị na-akpọ gị òkù ka i soro Ndịàmà Jehova bi gị nso gaa n’ebe ha ga-anọ cheta ọnwụ Jizọs.—Gụọ Ndị Rom 1:11, 12.
N’afọ ọ bụla, nde kwuru nde ndị mmadụ na-abịa soro anyị n’oge nri anyasị nke Onyenwe anyị. Bịa ka ị chọpụta otú o si gbasa gị.